Liivarpuulimoo Totanhaam – eenyutu irra-aana? - BBC News Afaan Oromoo
Liivarpuulimoo Totanhaam – eenyutu irra-aana?
Yargan kiloopp jara diddiimtuu waggaa lama dura leenjisuu erga eegalanii as tapha shan Totanhaam waliin taphatani takkaallee hin mo'amne. Gaafa Dilbataa Weembileeyitti yeroo taphatan garuu kana itti fufsiisuu danda'uu?
West Haam Biraayitan waliin
Tapha torban darbeen Andi Kaarool kaardii diimaan dirree keessaa bahuun isaan miidhuus West Haam jalqaba bara dorgommii baranaa as fooyyee waan agarsiisan natti dhagahama.
Biraayitanis daqiiqaa xumuraa irratti rukuttaan adabbii xumuraa osoo itti rukutame Evartan hanga qabxii jalaa hiratutti ga'umsa bareedaa agarsiisaa turan.
Ammas jara West Haam akka rakkisan nan amana. Garuu, gareen Islaavan Biilich waan keessa bahu natti falkkaata.
Chelsii Waatford waliin
Chelsiin yeroo darbe Kiristaal Paalaasiin injifatamuun isaa xiqqoo na rifachiise ture. Garuu, takkaatti garee badaa ta'e jechuu miti.
Garee amma amma qabaniin garuu waancaa bara darbe fudhatan lammeeffachuuf carraan qaban xiqqaadha.
Kilabiin Waatford dirreen ala ga'umsa cimaa qaba - tapha afur keessaa sadii injifatani tokko qixa bahani.
Haadarisfild Maan Yunaayitid waliin
Duratti jedhen ture, Haadarsfild mo'uu qofa osoo hin taane galchii muraasa barbaadu.
Taphoota jahaan darbe keessaa takka qofaa galchani- Tootanhaam afur itti galche Iswaansiinis lama itti galchee ture.
Ani Yunaayitid akka dhaqee injifatuun deeggara. Gaaffiin ka'u garuu, hagam isaan dhamaasuu danda'u kan jedhu.
Maan Siitii Barnileey waliin
Bara dorgommii baranaa Barnileey ajaa'iba hojjetaa jira. Deeggaraan isaaniillee taphoota saddeet keessaa tokko qofa mo'amani sadarkaa 7ffaa irratti taa'u jedhe tilmaame ture jedhe hin yaaduun na dhiba.
Barnileey Kilaboota gurguddaa morkatan haalaan qoraniiru.
Akkaataa Maanchistar Siitiin taphatutti garuu bakkuma hunda irraa carraa galchii uumu.
Niwkaastil Kiristaal Paalaas waliin
Kiristaal Paalaas torban darbe Chelsii injifachuun leellifame sana taphattoota irratti leenjisaan isaanii Roy Haadsan leenjii taphattootaa irratti waan godhan arguun danda'ama.
Ammas gara Sent Jeems paark imalanii qabxii gaarii jedhame eegama. Haa ta'u malee, tapha haalaan cimaa itti ta'a jedhe eega.
Tilmaama Laawroo: 2-1
Istook Bornmaawuuz waliin
Gaafan garee isaanii jalqaba ilaale kilaboonni kun bara dorgommii baranaa hammana sadarkaa xumuraa irratti argamu jedhe hin eegne ture.
Kilaboota lamaan keessaa, kan Bornmaawuz baay'ee na dhipisa.
Iswaansii Leestar waliin
Abbootin qabeenyaa Leestar waanuma kilabiin isaanii waggaa lama dura waancaa ol kaaseef ammas sadarkaa duraarra taa'uu qaba yaada jedhu qabaachuu danda'u.
Yeroon kunimmoo kilaba Weelsh, Iswaansiif , yeroo bareedaa dha. Torban darbe Haadarsfild injifatani ofitti-amanamummaa horataniiru.
Ga'umsi Iswaansii baranaa garaa nagahuu dhabuus jechuudha.
Saawuzampitan West Biroom waliin
Leenjisaan West Haam Tooni Puulis gareen isaa torban darbe dursee galchee booda garuu qixa bahuun isaan hin gammachiifne.
Erga gareen isaa liigicha irratti injifatees taphni jaha darbeera.
Saawuzampitan gaafa Dilbataa booda ka'e si'a lama Niwkaasil irratti galchuun qabxii hiratee ture.
Ammas gareen Saawuzampitan akka West Biroom injifatan nan deeggara.
Evartan Arsenaal waliin
Kilaboonni lamaanuu waan itti dhimmaman qabaatanis yaaddoon Evartan guddaadha.
Morkattoonni yoo jifatanii fi humnaan taphatan Arsenaal socho'uu rakkata. Akkuma yeroo kilaba guddaa morkatan deeggarttoonni Evartan cookan gaafa Dilbataas waan cookanif kilaba isanitti humna hora jedhee nan yaada.
Totanhaam Liivarpuul waliin
Totanhaamiif torban darbe gaarii ture. Falfaltuu Weembileeyitti isaan qabe cabsuun Bornmaawuuz injifachuu danda'aniiru. Chaampiyeensliigii irrattiis Maadriid waliin gaarii taphatan.
Liivarpuulis gaafa Kibxataa Maariboor akka hin taane godhanis taphni kuni garuu itti cimuu hin oolu.
Akka walitti dhiyaatani taphatan eegama. Taphattoonni Liivarpuul galchuu maluu garuu morkataan isaanii akka irratti hin lakkoofsisne gochuu rakkachuu danda'u.